Nkwupụta na ngwaahịa heparin Hebei Changshan enwetawo asambodo Halal |
Nkwuputa na ngwaahịa heparin Hebei Changshan enwetawo asambodo Halal
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd (nke a na-akpọ “Companylọ ọrụ”) isi iyi heparin sodium ngwaọrụ na heparin sodium gabigara Shandong Halal Asambodo Ọrụ Co., Ltd. (SHC) na saịtị nyocha dị ka MUI HAS23000 na MS1500: 2009, anyị natara akwụkwọ HALAL nke ụlọ ọrụ ahụ nyere na nso nso a. A na-ekwuputa ọnọdụ dị mkpa dị ka ndị a:
1. Ihe omuma banyere asambodo ogwu
Ngwaahịa echere: Heparin Sodium API, Heparin Sodium Injection
Asambodo Asambodo: MUI HAS23000 na MS1500: 2009
Onye anamachọ ọrụ: Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd.
Nọmba ndebanye aha HALAL: 03204928
2. Ọnọdụ ọgwụ ndị ọzọ: Bovine heparin sodium bụ sodium nnu nke aminodextran sulfate amịpụtara na mucosa eriri afọ ma ọ bụ nku bovine, nke nke mucopolysaccharides. Ọ nwere otu mmetụta ahụ na sodium porcine heparin dị ugbu a n'ọtụtụ ebe na usoro ọgwụgwọ. Bovine heparin sodium injection bụ isi:
(1) maka igbochi na ọgwụgwọ nke thrombosis ma ọ bụ ọrịa embolizing (dị ka myocardial infarction, thrombophlebitis, pulmonary embolism, wdg)
(2) ihe dị iche iche mepụtara.
(3) A na-ejikwa ya na arụmọrụ nke akụrụngwa ọbara, mgbasa nke extracorporeal, catheterization, ịwa ahụ microvascular na ọgwụgwọ anticoagulation nke ụfọdụ ụdị nyocha ọbara ma ọ bụ akụrụngwa. Asambodo HALAL bu asambodo asambodo maka ndi Alakụba ka ha rie ma rie ngwaahịa. Ugbu a, mba dị iche iche kwenyere na MUI HAS23000 na MS1500: 2009 ụkpụrụ asambodo halal. Ọtụtụ mba ndị Alakụba nabatara asambodo a.
3. Mmetụta dị na ụlọ ọrụ ahụ na ịdọ aka ná ntị ihe egwu: companylọ ọrụ ahụ na-emepụta ngwaahịa heparin bovine sitere na 2016 kemgbe oge a, ngwaahịa ngwaahịa heparin bovine enwetawo asambodo HALAL, na-egosi na ọ nwere ike ịbanye n'ahịa ndị Alakụba nke nkwanyerịta ụwa ọnụ. Companylọ ọrụ ahụ ga-agbaso usoro ndebanye ọgwụ ma ọ bụ usoro nyocha nke usoro ngwaahịa heparin bovine sitere na mba ndị Alakụba. Ka ọ dị ugbu a, erebeghị ere ngwaahịa ndị ahụ.